Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Diabetes ဆီးချို
(၁) နဲ့ (၂) က နာတာရှည်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝပျောက်တယ်ဆိုတာ မရှိပါ။ (၃) ကတော့ မွေးပြီး ကောင်းသွားတာ များတယ်။ နောက်မှာ အမျိုးအစား (၂) ဖြစ်သွားတတ်တာလဲ ရှိတယ်။ မွေးရာပါဆီးချို၊ Cystic fibrosis ရောဂါနဲ့တွဲတာ၊ Steroid ဆေးကြောင့်ဖြစ်တာ၊ စသဖြင့် ရှိသေးတယ်။
ဆီးချိုကို မကုဘဲထားရင် သကြားဓါတ် နည်းလွန်းသွားတာ နဲ့ သတိလစ်တာက ရုတ်တရက်ဖြစ်တာတွေပါ။ ရေရှည် ဖြစ်နိုင်တာတွေက နှလုံး-သွေးကြောရောဂါ၊ ကျောက်ကပ် အလုပ်မလုပ်တာ၊ မျက်စိထိခိုက်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဆီးချိုကိုကုတာမှာ သွေးတိုး (သွေးဖိအားများ) တာ၊ ကိုယ်အလေးချိန်ချတာ၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်တာတွေနဲ့ တွဲလုပ်ရမယ်။ ကုသရတာ ရေရှည်ပါ။ သွေးထဲက အချိုဓါတ်ကို ပုံမှန်မှာ ရှိနေအောင် လုပ်ပေးနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အစားအသောက်ထိန်းတာနဲ့ ဆေးပေးတာက မလုပ်မနေလုပ်ရပါမယ်။ ဆေးမှာ အမျိုးအစား (၁) ကို (အင်စူလင်) ထိုးဆေး၊ (၂) ကို စားဆေးနဲ့ လိုသေးရင်တော့ ထိုးဆေး ပေးရတယ်။ တချိန်တည်းမှာ လူနာကို ဆီးချိုအကြောင်း သိအောင် ပညာပေးရပါမယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဘို့၊ (ကိုလက်စထော) ချဘို့တွေပါ လုပ်ရမယ်။ ဒီလိုလုပ်တာ နေထိုင်မှုဘဝကိုပါ ပြောင်းစေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးချိုရောဂါဝေဒနာရှင်များအတွက် အကြမ်းအားဖြင့် အဓိက အစာအုပ်စု(၃)မျိုး -
(၁) လုံးဝရှောင်ကြဉ်ရမဲ့ အစားအစာတွေ = ဂလူးကို့စ်၊ သကြား၊ နို့ဆီ၊ ထန်းလျက်၊ ကြံသကာ နဲ့ အဲဒါတွေကနေ လုပ်ထားတဲ့ အစားအစာတွေ၊
• သစ်ဥ-သစ်ဖုတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် မျောက်ဥ၊ မုန်လာဥနီ၊ ကန်စွန်းဥ၊ အာလူး၊
• ပဲတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် ပဲပုတ်၊ ကုလားပဲ၊ ပဲကတ္တီပါ၊ ပဲနီလေး၊ ပဲထောပါတ်၊
• သစ်သီး အမျိုးမျိုး အစဉ်လိုက်ဆိုရင် ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ ဆီးသီး၊ စပျစ်သီး၊ လိမ္မော်သီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ သရက်သီး၊ နာနတ်သီး၊ သင်္ဘောသီး၊ ဖရဲသီး၊
• နို့နဲ့ နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေ အစဉ်လိုက်ဆိုရင် နွားနို့၊ ဒိန်ချဉ်၊ နို့ဆီ၊ ရေခဲမုန့်၊
• သကြား အမျိုးမျိုး အစဉ်လိုက်ဆိုရင် သစ်သီးသကြား (Fructose)၊ နို့သကြား (Lactose)၊ ကြံသကြား (Sucrose)၊ ပျားရည်၊ ဂလူးကို့စ် (Glucose)၊
• အချိုရည် အမျိုးမျိုး အစဉ်လိုက်ဆိုရင် ပန်းသီးဖျော်ရည်၊ လိမ္မော်ရည်၊ ကိုကာကိုလာ၊ လင်မနစ်၊
• Insulin, Sulfonylurea injection and Suspension ဆီးချိုအတွက်ဆေး၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = ဆေးထိုးသည့် နေရာ နီ-ရောင်-ယား၊ ကိုယ်ရောင်၊ အလာဂျီရ၊
• Metformin ဆီးချိုထိန်းဆေး၊ 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ လူကြီး 2550 mg ထက်မကျော်စေရ၊ ကလေး 2000 mg ထက်မကျော်စေရ၊
• Sulfonylureas ဆီးချိုစားဆေး၊
- ပဌမမျိုးတက် Orinase (tolbutamide) = 500 - 3000 mg; Tolinase (tolazamide) = 100 - 1000 mg; Diabinese (chlorpropamide) = 100 - 500 mg
- ဒုတိယမျိုးတက် Glucotrol (glipizide) 2.5 - 40 mg; Glucotrol XL (ext. rel. glipizide) 2.5 - 20 mg; Micronase, Diabeta (glyburide) 1.25 - 2.0 mg; Glynase (micronized gly.)3- 12 mg
- တတိယမျိုးဆက် Amaryl (glimepiride) 1 - 8 mg d. ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး = သကြားဓါတ်နဲခြင်း၊ အစာမကျေခြင်း၊ ပျို့၊ ရင်ပူ၊ သွေးအားနဲ၊ ဝလာ၊
• Alpha-Glucosidase inhibitors (Acarbose, Miglitol, Voglibose) ဆီးချိုစားဆေး၊
• Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors (DPP-4) ဆီးချိုစားဆေး၊
• Glibenclamide, Glimepiride = ဆီးချိုအတွက်ဆေး။
• Furosemide or Frusemide (Lasix) ဆီးသွားစေသည့်ဆေး ဆီးချိုးရှိသူတို့အား မပေးရ၊
• Estrogen and Progestogen ဟော်မုန်း နှစ်မျိုး ပါဝင်သည့် ကိုယ်ဝန်တားစားဆေး၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိနေလျင် မသုံးသင့်။
• Depo-Provera ကိုယ်ဝန်တား ၃ လခံထိုးဆေး၊ ဆီးချိုရောဂါ ရှိလျင် မသုံးသင့်။
• Dexamethasone (စတီရွိုက်)၊ ထိုးဆေး၊ စားဆေးကနေ ဘေးထွက် ဆိုးကျိုး ဆီးချိုဖြစ်နိုင်သည်။
သွေးထဲရှိသကြား (ဂလူးကို့စ်) ဓါတ်စစ်ဆေးခြင်း အဖြေ
အစာစားပြီးစစ်ခြင်း (၂ နာရီနောက်) Post Prandial = ၁၄ဝ ထက်နည်းရမည်။
အစာစားပြီးစစ်ခြင်း (၂ နာရီနောက်) Post Prandial = 7.8 mmol/L ထက်နည်းရမည်။
- Diabetic neuropathy ဆီးချိုကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ အာရုံကြောရောဂါ http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/diabetic-neuropathy.html
"အစားတွေ တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါလေ။ ဆီးချိုရှိလျှက် အသက် ၁၂ဝ ရှည်ပါစေ။"
Metformin ဆီးချိုစားဆေး ဘယ်လိုပေးကြလဲ
အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Type2Diabetes ဆီးချို အမျိုးအစား (၂) အတွက် Metformin ဆေးကို
• အသက် 10 to 16 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ တနေ့ 2000 mg အကြိမ်ခွဲပေးတာ အများဆုံး၊
• အသက် 17 နှင့်အထက် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ (သို့) 850 mg တတေ့ ၁ ကြိမ်၊ တနေ့ 2550 mg အကြိမ်ခွဲပေးတာ အများဆုံး။
• Metformin + Insulin 500 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်၊ တနေ့ 2500 mg အများဆုံး၊ metformin ER ဆိုရင် တနေ့ 2000 mg အများဆုံး၊
• တချို့အထူးကုဆရာဝန်တွေကတော့ သတ်မှတ်ချက်မထားဘူး။ လူကြီးအတွက် 2550 mg ကို အများဆုံး၊ ကလေး (၁ဝ-၁၆) အတွက် 2000 mg အကြိမ်ခွဲပေးလို့ သတ်မှတ်တာလဲရှိတယ်။
• 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် 850 mg တနေ့ ၁ ကြိမ်နဲ့ စပေးတယ်။ တပါတ်မှာ တခါ 500 mg ဒါမှမဟုတ် ၂ ပါတ်မှာ 850 mg တိုးပေးပြီး၊ အများဆုံး 2000 mg အကြိမ်ခွဲပေးတာလဲရှိတယ်။
• ၂ ပါတ်နေရင် 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ဒါမှမဟုတ် 850 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်နဲ့ ပေးတာလဲရှိတယ်။ ဒီနည်းမှာ တနေ့ အများဆုံး 2550 mg အကြိမ်ခွဲပေးစေတယ်။
• ကလေးတွေကို 500 mg တနေ့ ၂ ကြိမ်စပေးပြီး၊ တပါတ်မှာ 500 mg တိုးပေးပြီး၊ အများဆုံး 2000 mg အကြိမ်ခွဲပေးတယ်။